June 2021 - Super Union
ဇွန်လ၂၆ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်စာရင်းအရ မန်မာနိုင်ငံ တွင် ကိုဗစ်နှင့်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် မူးယစ် ဆေးတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်လာဟု ကုလ သမဂ္ဂ ထုတ်ပြန် ကိုဗစ်နှင့်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ မူးယစ် ဆေးတိုးချဲ့ထုတ်လုပ်လာတယ်လို့ ကုလ သမဂ္ဂက ဇွန်လ၂၆ရက်နေ့ပ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ “ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ် ဆေး …
ရခိုငျကတပျဆုတျတဲ့ စဈကောငျစီလှုပျရှားမှုဘာဖွဈမလဲ (Opinion) မနကေ့ ရခိုငျကနေ တပျမ ၄၄ နဲ့၂၂ ထဲက တပျရငျးတခြို့ကို ပွညျမဘကျပွနျပို့တာကနြေျာ့အမွငျ မန်တလေး-ဗနျးမျော ကိစ်စနဲ့ဆကျစပျမယျလို့ထငျပါတယျ။ ကနြေျာ့ ယူဆခကျြကိုပွောတာနျော။ မှားခငျြလညျး မှားနိုငျပါတယျ။ စဈတှကေနေ ပွနျပို့တဲ့ကိစ်စကို သတငျးပေါကျကွားမှာ …
08/08/2021 By fella News
တို့များအရွယ် “တော်လှန်ရေးဆိုတာ ကျေနပ်လို့ ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘူး။ မကျေနပ်လို့ဖြစ်လာတာ။ တော်လှန်ရေး ပန်းတိုင်ဟာ ဖိနှိပ်စိုးမိုးတဲ့ အာဏာရှင်တွေ ပြုတ်ကျအောင် ဖြုတ်ချရေးပဲ” (Ayn Rand) မနက်က လမ်းလျှောက်အပြန် ထမင်းကြော် ဝင်စားသည်။ အမှန်တော့ ခုတစ်လော …
ဘယ်ဘက်နေနေ ဘယ်သူ့ကိုထောက်ခံ ထောက်ခံ လာမည့် လပိုင်းအတွင်းမှာ အားလုံးကို တပြေးညီ ထိခိုက်လာတော်မယ့် Civil Warရဲ့ ရိုက်ခိုက်မူဒဏ်များ
ဘယ်ဘက်နေနေ ဘယ်သူ့ကိုထောက်ခံ ထောက်ခံ လာမည့် လပိုင်းအတွင်းမှာ အားလုံးကို တပြေးညီ ထိခိုက်လာတော်မယ့် Civil Warရဲ့ ရိုက်ခိုက်မူဒဏ်များ Civil war ဖြစ်ပြီး ဘာအလုပ်အကိုင် မှ မရှိတော့ပါဘူး။ ဘယ်သူကို ထောက်ခံ ထောက်ခံ …
ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ် တို့ ရဲ့ လူသူမသိတဲ့ နောက်ဖေးပေါက် ဆက်ဆံရေး
ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာယွတ် တို့ ရဲ့ လူသူမသိတဲ့ နောက်ဖေးပေါက် ဆက်ဆံရေး ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်သားတွေကို ထိုင်းဘက်က ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရိက္ခာပစ္စည်းတွေ မကြာခဏဆိုသလို ဖမ်းမိနေတာ အား လုံးသိကြပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မြန်မာစစ်သားတွေကို ထိုင်းက ဘာကြောင့်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးနေရသလဲ. . …
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်အဆင့်ရော ဂင်းနစ်ရော မှတ်တမ်းဝင်သွားတဲ့ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး က ရွှေရေပုရပိုက်မှတ်တမ်း. ( တခုတော့ ခွေးသားရေပုရပိုက် ၊ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကရွှေရေပုရပိုက်မှတ်တမ်း….)
ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်အဆင့်ရော ဂင်းနစ်ရော မှတ်တမ်းဝင်သွားတဲ့ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး က ရွှေရေပုရပိုက်မှတ်တမ်း. ( တခုတော့ ခွေးသားရေပုရပိုက် ၊ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကရွှေရေပုရပိုက်မှတ်တမ်း….) ငပုက ကမ္ဘာ့ ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားသလို…မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်း ဂင်းနစ်ရော ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်အဆင့်ရောမှတ်တမ်းဝင်သွားပါပြီ။ ငပုမှတ်တမ်းက ခွေးရေပုရပိုက် မှတ်တမ်း… မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကရွှေရေပုရပိုက်မှတ်တမ်း…. …
မြို့တွင်း တိုက်ပွဲများ အချိန်မရွေး ဖြစ်လာနိုင်၍ နိုးနိုးကြားကြား ရှိရန် ကချင် တိုင်းရင်းသား တပ်တော် ကေအိုင်အေမှ ပြန်ကြားရေး အရာရှိ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူးမှ သတိပေး
မြို့တွင်း တိုက်ပွဲများ အချိန်မရွေး ဖြစ်လာနိုင်၍ နိုးနိုးကြားကြား ရှိရန် ကချင် တိုင်းရင်းသား တပ်တော် ကေအိုင်အေမှ ပြန်ကြားရေး အရာရှိ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူးမှ သတိပေး ကချင် တိုင်းရင်းသား တပ်တော် ကေအိုင်အေမှ ပြန်ကြားရေး …
မော်စကိုမြို့တော်ရှိ ဟိုတယ် သို့ ရောက်ရှိလာတဲ့ မအလ ကို ဂျပန်သတင်းထောက်မှ အင်္ဂလိပ်လို အင်တာဗျုးချိန် မအလ ကြီးမှ ဟီးဟီး ဟီးဟီးနဲ့ တဖက်လှည့်သွားမူကို ဂျပန်မီဒီယာများမှ အမိအရထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ ( ထွက်ပြေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ပါဝင်ပါသည်။ )
မော်စကိုမြို့တော်ရှိ ဟိုတယ် သို့ ရောက်ရှိလာတဲ့ မအလ ကို ဂျပန်သတင်းထောက်မှ အင်္ဂလိပ်လို အင်တာဗျုးချိန် မအလ ကြီးမှ ဟီးဟီး ဟီးဟီးနဲ့ တဖက်လှည့်သွားမူကို ဂျပန်မီဒီယာများမှ အမိအရထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ ( ထွက်ပြေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် ပါဝင်ပါသည်။ …
” နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းတွေကို ဖြေရှင်းဖို အာဆီယံ ဘုံသဘောတူညီချက် အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ စစ်ကောင်စီကို အမေရိကန် တိုက်တွန်း”
” နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းတွေကို ဖြေရှင်းဖို အာဆီယံ ဘုံသဘောတူညီချက် အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ စစ်ကောင်စီကို အမေရိကန် တိုက်တွန်း” မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) ရဲ့ …
Patek Philippe နာရီဝတ်ဆင်သည့်ကိစ္စဖြင့် မြန်မာပြည်အခြေစိုက် Elevenမီဒီယာ က ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို စွပ်စွဲခဲ့ပြီး ယင်းနာရီ အမှန်တကယ် ဝတ်ဆင်သူမှာ စစ်ကောင်စီ ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်နေ
Patek Philippe နာရီဝတ်ဆင်သည့်ကိစ္စဖြင့် NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် Elevenမီဒီယာ က ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို စွပ်စွဲခဲ့ပြီး ယင်းနာရီ အမှန်တကယ် ဝတ်ဆင်သူမှာ စစ်ကောင်စီ ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်နေ Eleven Media Group က Patek …